सिधाकुरा जनतासँगः भद्रगोल र दुगन्धित चाँगुनारायन, सगरमाथा अञ्चल अस्पताल आफै बन्यो विरामी देखि ट्राफिक प्रहरीको दादागिरीसम्म « News24 : Premium News Channel
सिधाकुरा जनतासँगः भद्रगोल र दुगन्धित चाँगुनारायन, सगरमाथा अञ्चल अस्पताल आफै बन्यो विरामी देखि ट्राफिक प्रहरीको दादागिरीसम्म
चाँगुनारायण मन्दिर बन्यो दुर्गन्धित, भद्रगोल र दुर्घन्दको तस्वीर खिचेर पर्यटक फर्किन बाध्य
काठमाडौं । विश्व सम्पदा सुचिमा सूचिकृत भतmपुरको चाँगुनारायाण मन्दिरको फोहोर व्यवस्थापन नुहँदा मन्दिर परिसर दुर्गन्दित बनेको छ ।
दैनिक सयौँ आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटक मन्दिर अवलोकन लागि पुगेपनि मन्दिर परिसरमा भएको शौचालय तथा आरम गर्ने ठाँउ दुर्गन्दित छ । प्रति व्यक्ति ३ सय रुपयौँ टिकट लिएर मन्दिर परिसरमा जाने विदेशीहरु शैचालयको खोजीमा बाहिरका रेष्टुरेण्टमा जानु पर्ने बाध्यता छ ।
विश्व सम्पदा सुचिमा सुचिकृत चाँगुनारायण मन्दिर परिसरको शौचालयको अवस्था हेर्नुहोस । भुकम्पबाट क्षतीग्रस्त सत्तलहरुको भग्नावशेषको समेत उचित व्यवस्थापन गरिएको छैन । यहि भद्रगोल र दुर्घन्दको तस्वीर खिचेर पर्यटक फर्किन बाध्य छन् ।
मन्दिरको सरसफाइको जिम्मा पाएको चाँगुनारायाण नगरपालिका तथा वडा न ४ भने मन्दिरको यो अवस्था बारे बेखबर जस्तै छ ।
नगरापालिकाले मन्दिरको फोहोर व्यवस्थापानको लागि वार्षिक ४२ लाखमा ठेक्का दिएको छ तर यसको कार्यान्वयन कसरी भएको छ भन्ने कुरा यी दृश्यले स्पष्ट पार्छ ।
सगरमाथा अञ्चल अस्पताल आफै बन्यो विरामी
यो सप्तरीको राजविराजमा रहेको गजेन्द्रनारायण सिहं सगरमाथा अञ्चल अस्पताल । अञ्चल अस्पताल भए पनि यसको सेवा र क्षमता स्वास्थ्य चौकीको जत्ति पनि छैन । अस्पतालमा १८ विषेशज्ञ चिकित्सकको दरबन्दि छ तर डाक्टर भने २ जना मात्रै छन् ।
८ बर्षदेखी अस्पतला निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टकै भरमा छ । डाक्टर अभावकै कारण ८ बर्षदेखी प्रसुती वाहेक गम्भीर प्रकृतिका कुनै पनि सर्जरी भएक छैनन् । बिषेशज्ञ डाक्टर र उपकरणको अभावमा उपचारको लागि समस्या भैरहेको अस्पतालका बरिष्ठ कन्सलटेन्ट फिजियसन डा रञ्जितकुमार झा आफै बताउँछन् ।
अस्पतालमा सबै भन्दा बढी महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी बिरामीहरु आँउछन् । अस्पतलामा महिला तथा बालबालिका विषेशज्ञ नभएकै कारण बिरामीलाई अन्य निजी अस्पतालमा रिफर गर्नुको विकल्प छैन ।
अस्पतालमा ११ औं तहको प्रमुख कन्सलटेन्ट ‘अब्स एण्ड गाईने’, ‘जेनेरल फिजिसियन’ र ‘पिडियाट्रिसियन’ तीनै वटा पदहरु रिक्त रहेका छन् । त्यस्तै ९÷१०औं तहका बरिष्ठ कन्सलटेन्ट ‘अब्स एण्ड गाईनो, ‘पिडियाट्रिसियन’ र ‘फिजिसियन’, को दरबन्दी रहेपनि डाक्टरहरु भने छैनन् ।
अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि स्थानीय नेता विकासकुमार तिवारीले गत मंसिरमा अस्पताल सुधारको माग गर्दै १८ दिन लामो अनशन बसेका थिए ।
तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले १५ दिने भित्र प्रसुति गृह सञ्चालन गर्ने, १ महिना भित्र दरबन्दी अनुसारका सबै विशेषज्ञ डाक्टर उपलब्ध गराउने, तथा अस्पतालमा आवश्यक सबै उपकरण यथासक्य खरिद प्रक्रिया सुर गर्ने सम्झौता सहित अनशन तोडाएका थिए ।
तर सम्झौता सहित अनशन तोड एक बर्ष बढी भैसक्दा पनि कुनै पनि सम्झौता कार्यान्यन नभएपछि फेरी आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको तिवारी बताउँछन् ।
६ जिल्लाका नागगरिकको स्वास्थ्य सेवा दिनु पर्ने अस्पताल लामो समयदखि आफै विरामी छ ।
ट्राफिक प्रहरीको दादागिरीः ट्राफिक प्रहरीले कलंकी चोकमै वाईक सवारलाई निर्घात कुटपिट गरे
ट्राफिक प्रहरीले पार्किङको वहाना बनाएर गाडीको हावा फुस्काईदिने, सहचालकलाई चरोट पोलिदिने देखी ट्राफिक वृतमै उठिवास लगाइदिन्छु भनेका देखाएका थियौँ ।
यो बिषयमा ट्राफिक प्रहरी प्रवतmा उमेश रंञ्जितकुमारसँग कुरा गर्दा उनले उन्ले यो कुरा स्विकारेन्न । उनले ट्राफिकले दुरव्यवहार गरेको भिडियोमा नदेखीएको भन्दै ट्राफिक प्रहरीले यस्तो नगर्ने बताएका थिए ।
शुक्रबार पनि काठमाडौंको कंलकी चोकमा ट्राफिक जवानले एक मोटरसाइकल चालकलाई निर्घात कुटपिट गरेकोे छ । यो भिडियो हेर्नुहोस् ।
ट्राफिक प्रहरीले वाईक सवार व्यक्तिलाई कुटिरहेको देखेपछि हाम्रा एक जना दर्शकले आफ्नो मोवाईल खोली रेकर्ड गर्न शुरु गरे । उनले मोवाईल निकाल्दा ती ट्राफिक हातपात गरि फर्कदै थिए ।
त्यही बेला बाईक सवार व्यक्ति अएर किन हात हालेको भनि ट्राफिकलाई रोक्न खोज्छन् । तर ती ट्राफिक प्रहरीले फेरी ती व्यक्तिलाई नालिमा खसाउदै टाउकै टाउकोमा हिर्काउन्छन् ।
यो भिडियो हामीलाई प्राप्त भएपछि हामीले यस विषयम रिपोर्टिङ सुरु ग¥यौ । यो भिडियोमा कुट्ने प्रहरीको नाम भिडियो खिच्ने व्यक्ति र स्थानियहरु आफैले भनि सकेका छन् । स्थानियहरुले तिन्लाई छोप्न खोज्दा तिनी भागेका छन् ।
हामीले कुटाई खाने व्यक्तिको नाम खोज्न कलंकी ट्राफिक प्रहरी निरिक्षक बिमल थापालाई सम्पर्क ग¥यौ र उनलाई ती व्यक्तिका बारेमा जानकारी दिन आग्रह ग¥यौ ।
उन्ले कुटाई खाने व्यक्ति पवनसिंह बस्नेत भएको जानकारी गराउदै कार्यालय पुगेपछि नम्वर दिने बताए । उनले त्यसो भनेको केही बेरमै प्रहरी निरिक्षकलाई लगेको ल्याण्ड लाईन नम्मबरमा पवनसिंह बस्नेतको फोन आयो ।
हामीले उन्को नम्बर मागि उनलाई आफै फोन ग¥यौ । उन्ले ट्राफिक नियमको उलंघन आफुबाट भएको तर सामान्य बादविवाद मात्र भएको बताए । उनले यसो भनेपछि हामीले हाम्रो ल्यण्डलाई नम्मबर कंहा बाट पाएको भनि प्रश्न ग¥यौ । उनले ईन्टरनेमा खोजेको बताए ।
त्यसको केही बेर पछि हामीले पुन कलंकीका प्रहरी निरिक्षक बिमल थापालाई फोन ग¥यौ उन्ले भने आफुले पवनसिंह बस्नेतलाई फोन गर्न लगाएको र आफुले नै नम्बर दिएको बताए ।
हामीले कुटपिट गर्ने प्रहरी मंगल चौधरीलाई पनि सम्पर्क ग¥यौ उन्ले पनि सामान्य झगडा भएको भन्दै आफुहरु मिलिसकेको बताए । यो सुन्नुहोस् ।
ट्राफिक प्रहरीसंगको विवाद भएपछि पवनलाई एक रात कालिमाटी चौकीमा नै राखिएको रहेछ । घटनाको वास्तविक्ता वुझ्दै जाँदा पवनले ट्राफिक नियमको उलंघन गरेका भने रहेछन् ।
तर नियम उलंघन गर्ने व्यक्ति यसरी निर्घात कुटपिट गर्नु र उनैलाई रातभरी थुनामा राख्नु कतिसम्मको न्यायसंगत हो । के ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने ट्राफिक प्रहरीलाई यस्तै सिकाईन्छ त ? यहां भिडियोले सवै सत्य बोलिरहेको छ । तर मिलेमतोमा जाना जान सत्य लुकाउन खोजिएको छ ।
ईटहरी उपमहानगरपालिमा सिएफएल बल्व खरिदमा २० लाखको भ्रष्ट्राचार
सिफ.एफ.एल. बल्ब खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्ने विषयको छानविन गर्न गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख द्धारिकलाल चौधरीलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजानिक गरिएको छैन ।
उपमहानगरपालिकाले आफैले सिफ. एफ. एल. बल्ब खरिदका विषयमा छानविन गर्न गठित समितिले इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख द्धारिकलाल चौधरीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
उपमहानगरपालिका क्षेत्रका सडकमा प्रयोग गर्न खरिद गरिएको सि. एफ. एल. बल्ब र सेटमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रिय कार्यालयले कागज लगेपछि उपमहानगरपालिकाले समेत वडा नम्वर ६ का वडाध्यक्ष दिपक गौतमको संयोजकत्वमा ७ सदस्सिय छानविन समिति वनाएको थियो ।
प्रतिवेदनले करिव विस लाख आर्र्थिक अनियमितता भएको देखाएपनि नगरकार्यपालिकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन् ।
बुझाईएको प्रतिवेदनमा आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा खरिद गरिएका सि.एफ.एल. बल्ब तथा उपकरण खरिदमा २० प्रतिसतसम्म महँङ्गोमा सामान खरिद गरिएको आन्तरिक छानविन समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ ।
उपमहानरपालिकाले गत ०७४ श्रावण १ देखि कात्तिक ७ गतेका वीचमा ९७ लाख रुपैयाँ मूल्य बरावरका सी.एफ.एल. बल्ब खदिर गरिएको थियो ।
हामीले पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि उपमहानगरपालिकाका मेयर द्धारिकालाल चौधरी सम्पर्कमा आउन चाहेन्न । मेयर चौधरी अहिले व्यक्तिगत भ्रमणमा थाईलेण्डको राजधानी बैंककमा छन् ।